Ekuveleni Imvana 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Mnye uThixo, mnye Earth, omnye Abantu.
IBhayibhile isixelela ukuba uThixo « » kwaye wadala indalo, umhlaba kunye nomntu.
Ngokwekhalenda ngesiHebhere siza kulo nyaka-2016, le 5777 wekonyaka ekudalweni kwabo nguThixo.
Yintoni ukuvuma ingachasani lwenzululwazi pseudo-ubungqina ngokusebenzisa abantu kwiminyaka engaphezu kwesigidi.
Ukutyhubela imbali, iBhayibhile wafundisa abantu ukuba uwugcine umsonto womanyano phakathi koluntu noThixo.
Yeha, loo mntu endaweni ukusondela kuThixo le mfundiso liye laqhubeka ukuya kude.
Nangona imfundiso yeBhayibhile, iingcamango ezininzi ziye zavela kwimbali yoluntu. Kwakukho abanquli ilanga, inyanga kunye oothixo busporho wentelekelelo. nokuba abantu baqubuda njengoko bambi umzekelo ooFaro.
Ke indoda lanamhlanje ngakumbi sisithuko uThixo! Le ndoda iye omane umdali wayo okanye umntu mandundu enze ngokungathi uThixo yayingekabikho.
UThixo Ngoko akakho kwi ingqondo yomntu yanamhlanje, le ndoda yaqalisa nephupha lokuba uthixo.
EFransi nangona Clovis noJoan Arc, uye waqhubeka kubakhubekisa uThixo embalini (kwabulawa amaProtestanti on St. noBhartolomeyu, uzingela gqwirha, ukubanjwa nokubulawa ye Templars noJeanne arc njl ..) kwaye France iye ekugqibeleni wakhululwa uThixo karhulumente ngexesha revolution ka1789.
IRiphabliki ebefuna ukuqhuba uThixo nobomi eFransi ka1789 kwaye sibone apho ekugqibeleni kukhokelela.
Kwiminyaka 227 kamva, France awile, ahlasela bawagqogqa impahla yakhe ngala bahlaseli pseudo-ngoxolo abo yamkelwa ezibalulekileyo, kuncediswa, wagcinwa, wondla, bakhathalelwe kwekhululekileyo de ihlawulwe ngenyanga irhafu yethu!
Ukanti French kungenzeka ukuba uphile « ubuhlwempu » nangona umsebenzi rhoqo buhlungu kunye imithwalo enzima engakumbi mali usapho yayincinane « ziinzingo » xa ehlaselwa ngqesho.
Eziba bona olona zokuhamba yaye ingathethekiyo iintsizi emva ubomi ukusebenza ixesha elide ngokuqhelekileyo buhlungu kakhulu.
Abantu French bane kwaye agwetyelwe ukungakhuseleki kunye sebugxwayibeni kuzuze ezi kubahlaseli bamanye amazwe ngazo banyanzelwa ngoorhulumente ukuhlala ndawonye.
Le iseti live kukho iindleko kwaye abantu French bayixhasayo iintlungu ezinkulu « Irhafu, iirhafu, imirhumo neentlawulo zisoloko kubaluleke ngakumbi, lo gama izibonelelo zentlalo ekwehleni ingongoma yokuba abantu isiFrentshi babanobunzima unyango.
Umongameli François Hollande wenze, ubuncinane encwadini yakhe ex-kwinkosikazi, aphathwe kakubi abantu bakhe ngokubiza kubo: « Le engenamazinyo ».
Eli binzana elihlazo, elihlazo, kwaye luthoba elithukayo kunjalo ngumfanekiso ubunyani, kuba yinyaniso yokuba isiFrentshi asinakukwazi ukuphilisa kakuhle.
Iindleko unonophelo lwamazinyo amazinyo zidla elixhome abantu abaphila ubuhlwempu kunye nenkxwaleko, kwaye eneneni rhoqo ngabantu engenamazinyo.
Xa kuthelekiswa la unyango kunye amazinyo bakhululekile ukuba zonke ezi bahlaseli amazwe!
Siyaqonda amaKristu ukuba ukungabikho kaThixo ubomi France ezabangela ukuba le meko YeApocalypse.
Ke ukuze siqonde, uThixo wayefuna ezi « ngabahlaseli » amazwe zivela unqulo Khwezi « Islam. »
Njengoko sibona mihla siphila kumaxesha ekupheleni kwaye baya kuphela kunye ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu uKumkani.
Ndinethemba elikhulu ukuba imbuyekezo ngenyanga kaSeptemba okanye inyanga ka-Oktobha 2016
Kodwa kufuneka siqonde ukuba Mna sele engalunganga kwaye andikwazi ngaphandle ukuba nangoku ndiyaphazama eli xesha.
Awu, kusenokufuneka alinde iminyaka embalwa ukubuya kweNkosi.
Kodwa andiyi nethemba ngenxa intlungu luqaliweyo (ukuba ayinakuphikiswa) kwaye akunibetha yeempi ezininzi ukususela nge-29 Septemba 2008.
Kwakhona siyazi ukuba kuya kuyenza mandundu ngakumbi ukuba babuyele uzuko uYesu Kristu ukususela ekubuyeleni kwakhe kufuneka njengoko inenimba.
Ngoko intlungu phambili yaye ziqhubele kuphela ngaphezulu!
Ukuba uYesu Kristu ubuyisela kulo nyaka-2016, siya kukhululwa ngokukhawuleza kuzo zonke ezi iintlungu ebomini. Ngoko ke kubalulekile ukuba ahlale ngamadlelane kuThixo ngomthandazo sicela ukuxolelwa yonke imihla ngenxa yezono zethu, iimpazamo zethu, iimpazamo zethu, izenzo zethu ezibi neengcinga zethu ongcolileyo.
Esinayo ebomini bethu ukubonisa amaxabiso zamaKristu ngokunceda bonke abo bamcelayo kuthi uncedo kuquka ezi bahlaseli.
Kodwa kwakhona kufuneka akhusele inkcubeko yethu, imbali yethu, imilinganiselo bethu nelizwe lethu France.
Qaphela ukuba ndithi ngokuba France lisebenza wonke kwilizwe eYurophu unolungenelelo ukuba iilwimi zethu, amabali zethu kunye namazwe zethu ezahlukeneyo, yinto eqhelekileyo ukholo lwethu lobuKristu.
Kufuneka acacise ukuba yobuthathaka koorhulumente bethu ikhuthaza kwezizwe zonke imfuduko ezingenyukiyo nje Aram kodwa ehlabathini lonke bafuna ubomi obubhetele eYurophu yaye ingakumbi eFransi.
Ngemihla yokugqibela phambi kokubuya kukaYesu Kristu uya kuba inkcazelo Mathanzima koBuntu. Simele sithandaze ngamandla kuba yonke into ekufuneka yenziwe kulo nyaka, 2016.
Oku kushiya ixesha elincinane kakhulu ukuzisa nani likhulu yeziqu kuKrestu ngobhaptizo.
Kwakhona mhlawumbi ngenxa yokuba ubhaptizo kwenzelwa bonke mbacu ukuba uThixo wathuma kubo eYurophu. Ngoko ke musa ukuthandabuza, ukundulula ubhaptizo bonke ucele uncedo lwakho.
Cinga ukuba uThixo wayefuna ukuba, si nokuba se endaweni zonke iintsapho ezingeyonzalelwane yalapha.
Kuhlala kwaye sibulela kuThixo ngenxa uthando ekhokelela ukuba nangona izono zethu, iimpazamo zethu, iimpazamo zethu, izenzo zethu ezibi neengcinga zethu ongcolileyo.
Awu, ukuba uYesu Kristu uyacotha yokuza kubuya kwakhe kamva, ngoko siza kuba yingxaki enkulu ngo-2017.
Oku kuya kuba lokuvotela umongameli eFransi elowo isazela baya ukuvotela umgqatswa abalukhethayo.
Kufuneka ke ulumkele ukuba kwiRiphabliki unesithunzi ngokwayo yaye ulongamo yayo iye wapheliswa eluqhuba yayo.
Impembelelo kunye nempembelelo yaseFransi ehlabathini périclitent ngakumbi ukususela General De Gaulle.
Ukuba kwenziwe nto ime ngokusisigxina kwaye umva ekuhlaselweni, kule minyaka izayo uya kuba amaKristu liqaqobana waseFrance kwiRiphablikhi ukuba isekho kodwa saba wempangelo Koranic olu tshintsho luya kuba ngokwedemokhrasi kwi-ngokweentloko.
Abasemagunyeni baye ukuzakhela ukuthetha inyaniso ebantwini. Ngoko ke akukho manani ngokusemthethweni lubekhona kwinani lesiFrentshi amaSilamsi kodwa nabani ubona kwimizi ngemizi, kwi Kubumelwane ukuba uluntu amaSilamsi kakhulu kwiindawo France naseYurophu.
Kwi Ngokucacileyo, ukubaluleka kwezi zoluntu ixhomis!
Inkxaso kwi ngokweentloko ezi nkqubo asiyi yemfuduko amaSilamsi uya masingasuki Ukholo, ubuKristu noYesu Kristu.
UMgwebi ukusingela abafuduki luya wasindululela elukholweni, ubuKristu noYesu Kristu.
Kodwa musa ukulibala ukuba uthando luqala nesiqu kwaye kufuneka nobomi.
Ngoko nantoni na izigqibo ezenziwe ngamagosa bethu abanyulwe zonke ezi bahlaseli abafuduki, kufuneka baqinisekise ukuba izigqibo usetyenziswe uthando kunye nothando lobuKristu.
Ngelo xesha amadoda ukwala uThixo, esithi « humanists » bona bazikhathaza kakhulu malunga ziyahlelwa abanye zekamva labo kunye ziyahlelwa imiphefumlo yabo.
Ngoko ke kusenokwenzeka ukuba emva konyulo umongameli, zonke iingxelo zonyulo nezithembiso, ingena ngokwelizwe kuqhubeka engacimekiyo eYurophu ingakumbi eFransi.
Iimbangi efanayo usoloko ukuvelisa iziphumo efanayo, ukuba Islamists besisempuma, baya kuyenza eYurophu.
Ugonyamelo, imfazwe yamakhaya nemfazwe yonqulo uya ngoko ngokuqinisekileyo nowokuchwayita emva ukrakra emva konyulo kamongameli isiFrentshi. Ukuba akukho phambi !!!
Kweli hlabathi apho Pope ngokwakhe uphelelwe lukholo ukuya ukuqaphela zonke iicawa lokwenyaniso njengoko thungeni linye kuThixo, ngoko iyaqondakala into yokuba abaninzi abazalwana noodade bethu abagcina ntsingiselo ukholo liya kuphela.
Imiqathango kwakhona kusiba inkululeko yethu. Kungekudala uya ngokuqinisekileyo akuyi sibe nenkululeko ngokungaguquki zonke izenzo ngokuchasene ukholo lwethu njengamaKristu, ngokuchasene iicawa zethu kwaye ngokuchasene nobundlobongela kubazalwana noodade bethu eFransi kunye nehlabathi liphela.
Ngoko bazalwana bam abaziintanda noodade, ndibhale iincwadi ezimbini emnyango lokuqala kwisihloko igama blog. « Ke umshumayeli yesiQondisi uKumkani » kwaye anezihloko « Ukususela ubumnyama uyeza ekukhanyeni » Le ncwadi inxalenye yokuqala ibonisa ubukho bukaThixo yaye ucacisa ukuba kutheni abaninzi indalo yakhe indoda iya kuba kuyijika abo bakhetha ukulandela ukuthanda kukaThixo. Isigaba sesibini sale ncwadi iqulathe amanye amanqaku kwam ingqalelo ezibalulekileyo kwaye ugcine ukuvalwa unakho blog inxamnye kwaphela nentando yam.
Eyesibini incwadi isihloko « eFransi, ngempucuko Republic enyanyeni »kwaye ogama nezihlokwana yi « INtshumayeli Return of uKumkani »wacacisa kwinxalenye yokuqala njani singeyeli wamngcatsha ngeziganeko zebali fatidiquement ukufumana thina ekupheleni kwexesha ebukhobokeni. Kananjalo lichaza indlela France ungafumana kule sonwabe, « ubuyiselo lwe uKumkani France, » ukuba ukubuya kukaYesu Kristu kufuneka kwenziwe kumashumi ambalwa. Isigaba sesibini sale ncwadi ikwaqulathe amanye amanqaku yam ndiye kwakhona kubalulekile ukugcina ukuvalwa unakho blog inxamnye kwaphela nentando yam.
Yintoni na eyenzekayo, ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu ngenxa kwisizukulwana sethu, eli ngokuqinisekileyo! Kwaye awehlelwa isithunzi kwamathandabuzo!
Kodwa iBhayibhile Kwakhona usixelela ukuba xa uYesu Krestu uza kubuyela ukholo oyinyaniso phantse shwaka akwabakho ehlabathini.
Ngoko ke, ukuba ndithe ndiqinisekile ukuba uza imbuyekezo kunye maniso weNkosi yethu uYesu Kristu, kunyaka-2016, inyani kukuba ndibe engalunganga kwaye zombini iincwadi uya kukunceda kuba nguThixo kuphela olwaziyo oko iintshaba banako Faith.
Sibona kwaye bagcine ukuba ubuKristu ukususela 2008 wehlela kwelabafileyo. Abazalwana noodade bethu sibulawa ehlabathini ewohlokayo ngokubanzi kwamagosa bethu abanyulwe. Sifumanisa ukuba Islam walwa nxamnye namaKristu.
KaSeptemba 27, 2015 Pope Francis uye wakhanyela uYesu Kristu Cathedral St. Patrick kwi-US, elingana ukuba isibhengezo ezisemthethweni ukufa ibandla lobuKatolika ezenziwe Pope Francis, abo sele avume iimpawu komsebenzi kwiRoma March 13, 2013 xa elimisiweyo.
Sifumanisa ukuba ixesha lihamba, okukhona siya « amaKristu » ziye sikhethwayo wayifaka esemkhumbini.
iintsuku ezimnyama phambili, ngoko ndagqiba ukubhala iincwadi ezimbini eziza kuba luncedo ukulungiselela iintlanganiso oyingqondi okanye ayimfihlo ziyafuneka ngamaKristu okuqala okanye unako lishumayele kwaye kwakhona de ibuye iNkosi.
Ngethemba, nangona kunjalo, ukuba oku kuyimfuneko, kwaye ngeli xesha kulungile na ukuba uYesu Kristu ubuyele ngokwenene kulo nyaka 2016 ngenxa ngenyanga kaSeptemba okanye Oktobha, ndicinga kumsitho yomthendeleko ngamaxilongo phakathi 03 no-Oktobha 4.
Ndamchazela kwi blog kwiveki yokugqibela ekupheleni yeBhayibhile ixesha, ixesha leminyaka esixhenxe kwakuprofetiwe umprofeti uDaniyeli kwiminyaka engama-600 ngaphambi yokuqala ukuza kukaYesu Kristu.
Minyaka isixhenxe idlulileyo ukuvala ekupheleni kwexesha, sisohlwayo sikaThixo. Oku kuchazwe isiprofeto ukuba eli xesha lonyaka-esixhenxe iquka ezibini izihlandlo emithathu enesiqingatha kwaye kwiminyaka emithathu enesiqingatha sesibini, iintlungu ikhanye kakhulu.
Njengoko ndabhengeza kwinqaku yam Ukubuya kukaYesu Kristu wanga 14 OKANYE-15 Septemba 2015! Ngethuba letheko ngamaxilongoukubuya kukaYesu Kristu kwafuneka angenelele ekupheleni kweminyaka esixhenxe imbandezelo, kwasekuqaleni ibekwe ukuya kwi-29 Septemba 2008, emva kwengozi kwimarike ndingowenzala Wall Street kuba amandla ukuqaphela ukuba ukususela ngoko yonke imiqondiso ebonisa kunye neziprofeto ukubuya kukaYesu Kristu zisenzeka ngamandla ngakumbi nangakumbi kwaye ubukhulu.
Ukubuya kweNkosi yethu kwafuneka angenelele ukuya kuSeptemba okanye Oktobha 2015. Ukanti bonke safumanisa ukuba yimpazamo.Kodwa intlungu lwalulolwenene nokukhula ukususela nge-29 Septemba 2008.
Imposiso Ndicinga senziwe ngokuthi kuthathelwe ingqalelo ukuba siprofeto ekhankanywe iminyaka kabini emithathu enesiqingatha.
ekugqibeleni ndaqonda ukuba, ukuba esi siprofeto sithi iminyaka kabini emithathu enesiqingatha lixesha ofileyo phakathi iiphiriyodi ezimbini kwiminyaka emithathu enesiqingatha.
Ixesha lokuqala ophele ngoMatshi 2012 umqondiso omkhulu emazulwini ukuba ngelishwa ngqalelo njengoko kwakunjalo esibi nezazingalindelwanga: Spanish ulwimi ividiyo.
Kwinxalenye yesibini emithathu enesiqingatha iqala ngokoluvo lwam ngokuqeshwa Pope Francis 13 Matshi 2013 kwaye kucacile ukuba intlungu iya kuqhubeka kwaye mandundu nangakumbi zonke iinkalo.
Emithathu enesiqingatha emva ngoMatshi 13, 2013 sizisa ukuba September 13, 2016!
Ngoko ke, simele nobuganga ndivume. Uhlalutyo ngemiqondiso yonke neziprofeto ezikhankanywe eBhayibhileni ukwazisa ukubuya kukaYesu Kristu ityhila uluhlu olude kweziganeko zonke iintlobo ukuba siphila Emhlabeni.
Iintlekele, iinyikima, imililo, izantyalantyala zemvula, izaqhwithi, iinkanyamba, iEksodus, izifo, neendlala, ugonyamelo, iimfazwe namarhe eemfazwe, ubugrogrisi, ukulahlekelwa imilinganiselo, ukusweleka abaninzi iintlanzi, iintaka kunye zasendle nemfuyo kungekho nkcazo bantsuku ubomi isibhakabhaka uluntu. Le misitho iye waprofeta ukwazisa ukubuya kweNkosi noKumkani, uYesu Kristu, unyana okuphela kaThixo esiza kulawula emhlabeni iminyaka eliwaka ezayo de yentshabalalo.
Ewe engaqhelekanga oko kunokubonakala ngamana mhlawumbi Umalunga ukuhlangabezana uMdali wethu.
Ndifuna ukuba silumke, athi mhlawumbi kwaye bayavuma ukuba mna andikezi mhlawumbi kanye ekulahlekisweni.
Andinguye umprofeti sele uyazi kwaye njalo ndiya kuba neentloni usenokungavumi inokungachaneki. Kodwa ke, ukuba uYesu Kristu wasishiya miqondiso ukusenza khangela kwaye balinde ngeli ngokusinika amandla kunye nethemba eziyimfuneko ukoyisa iingxaki ezinxulumene ekupheleni kwexesha.
Nantso iindaba ezilungileyo ukubuya kweNkosi yethu.
Kodwa uyakwazi ukucinga ukuba xa kukho iindaba ezimnandi, kukho kwakhona iindaba ezimbi.
Iindaba lokuqala ezimbi kukuba kwiinyanga ezizayo uza kuba nenqala nzima njengoko kukhokelela kufutshane kakhulu imini ukubuya kukaYesu Kristu kwaye ukuba imihla yokugqibela iya kuba inzima. Baya kuba lixesha ngemini yomsindo kaThixo.
Ngako oko ke kubalulekile kakhulu kwiinyanga ezizayo ukuba bawenze kakhulu ngomthandazo, acele uxolo kunye nenguquko. Emva ukuze kulunge kakhulu kwexesha !!!
Iindaba ezimbi yesibini kukuba andazi ukuba noxhwilo ibandla liya kuba ngomzuzu wokugqibela okanye phambi kwexesha ngemini yomsindo kaThixo.
Thandaza bazalwana bam abaziintanda noodade ukuze ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu kungaphumi benefit lilibaziseka ngenyanga kuba intlungu iya kuba nzima ngaphezu kwabaninzi kuthi.
Kodwa ke thina sibe nangona ukuchaneka uhlalutyo wam kwakhokelela ukuba ulinde embalwa iminyaka engaphezu ukubuya kweNkosi yethu ngaphambi ndicela uxolo.
Iindlela zikaYehova, yaye ndiyifumene, kaninzi luluqilima!
Ukuba kufuneka ulinde kumashumi ambalwa kuya kuba nzima kakhulu kwaye Nditsalela ingqalelo into yokuba ubuxoki wabalandeli sombandezeli kaKristu mkhulu kunabo anizimasi, yaye ndiya kumema ukuba ukujonga le vidiyo kweli phepha blog: » aPHA « ukuze ufumane ingcinga inqontsonqa ubuxoki siyanyamezela kwasemaphakadeni kubudala komHlaba.
Bazalwana abaziintanda, Dade kuKristu Yesu Ndiyanimema ukuba odola iincwadi zam Edilivre iintlelo ezimbini.
UThixo akusikelele, akugcine kwi ekunene kwaye umendo onesidima uthando, uxolo, ubulungisa, uvelwano kunye ukuthobeka ukuba wazilanda uYesu Kristu kwaye kukhokelela nguye uThixo.
Kuba ukuqonda ngcono ngoko kuza abantu, ndiyanibongoza ukuba ufunde inqaku yam Ukubuya kukaYesu KRISTU NGOSEPTEMBA OKANYE Oktobha 2016
Umthendeleko wamaYuda namaxilongo kubanjwa ngomhla we 03 no-Oktobha 4, 2016 kumele kusimangalise sonke ebusweni Umhlaba …. !
Iintlelo Edilivre – APARIS
175 Boulevard natole France
Tel: 01 41 62 14 40 / Ifeksi: 01 41 62 14 50
Xa lokuvala eli nqaku, ndiye ndaphawula kumabonwakude ukuba eyoyikekayo ye sa betha iintsapho ezininzi ngeebhombu eBelgium.
Ndiyangqina apha esingqaleni ezinzulu kwaye bameme zonke bazalwana bam abaziintanda noodade kuKristu ukuba bathandazele amaxhoba kunye neentsapho zabo.
Musani ukubaphulaphula ukuthiya kodwa ezi zenzo zibi kusenza siqonde ukuba abagrogrisi zenza ekubulaweni zabo egameni likaThixo abayibiza Allah!
YamaSilamsi unqulo Khwezi yaye ukususela ekuqalweni yayo Islamists zithetha Uthando izixhobo ngesandla!
Kwaye uthi ukuba Pope igcinwe ukuba zonke iinkolo ziyinyani kwaye kwakhona umendo kuThixo!
Musa ukulibala okomzuzwana ukuba uYesu Kristu wathi :
« Ndim indlela nenyaniso nobomi; akukho namnye uzayo kuBawo engezi ngam! «